China TC76 ebiyelwe weld ikhanda ifektri kanye nabaphakeli | I-AEON
TC76 kuyinto orbital TIG weld ikhanda for okuzenzakalelayo tube Welding. Ububanzi obufanele be-tube OD buhlanganisa ukusuka ku- φ12.7mm kuye ku- 676.2mm. Le nhloko ye-weld isebenza kahle kakhulu futhi ikhwalithi ephezulu ye-weld enamanzi okupholisa wohlelo lwegiya lokujikeleza kanye ne-collet. Amakholishi angenziwa ngezifiso ngokuya ngesimo sangempela secezu lomsebenzi.
Ukusebenza kwe-Mechanical Homing
Okukhethekile kwe-φ12.7mm - φ76.2mm tube kuya ku-tube welding
Efanelekayo ukujiya mncane (≤3mm) tube Welding
I-Robust yakhelwe ukufakwa kwe-tube encane ngaphandle komkhawulo wesikhala
I-collet ejwayelekile futhi eyenziwe ngezifiso, impilo ende nokuhlala isikhathi eside usebenzisa
Ukushisela okuzenzakalelayo ngaphandle kokugcwalisa ucingo
Inkinobho yokulawula ku-weld head handle, elula emsebenzini wesayithi.
Lawa machungechunge ngamakhanda wokushisela we-orbital egumbini elivaliwe ngaphandle kokuphakelwa ngocingo okwenzelwe ithubhu ukuya kushubhu le-welding ngokuhlanganyela. Ukwakha isikhala esivaliwe ngokuqhamuka emkhathini we-ambient ngokusetha izinto zokwenziwa noma izinto ezisizayo, gcwalisa igesi evikelayo (ikakhulukazi i-argon) esikhaleni esivaliwe ukukhipha amagesi asebenzayo njenge-oxygen, ngaleyo ndlela inikeze inqubo yokushisela isimo esihle kakhulu ngenani elincane igesi esebenzayo. Leli yikhanda elilodwa lokusebenza kahle kanye nekhwalithi ephezulu yokushisela ngamanzi okupholisa kwekhanda le-welding & ukuqoqa kanye nokuqoqwa okukhethekile okwenziwe ngokuya ngezidingo zamakhasimende ezingaqinisekisa ukubekwa ngokunembile ngaphandle kokushisela indawo. Amakhanda e-TC weld ajwayele ukusetshenziswa ne-TubeMaster200A Orbital Welding Powersource ukwakha uhlelo oluphelele lwe-TIG tube / tube orbital welding olunomphumela omuhle kakhulu wokuwelda. Isicelo esivamile sisetshenziswa kabanzi kumishini ye-elekthronikhi, ekhiqiza imishanguzo, imboni yabaqhubi abancane, ukufakwa kwepayipi, imishini yokwelashwa kwamanzi, ezempi nezenuzi, njll.
I-Orbital welding chamber welding iyinqubo yokushisela ezenzakalelayo enekamelo elivaliwe elenzelwe ukuwelda ikhanda, elisetshenziswa kakhulu ezinqubweni zokushisela ezisezingeni eliphakeme, njengensimbi engagqwali ne-titanium alloy. Isici esibalulekile sokushisela ngokuphumelelayo i-orbital yisidingo sokulawula isiziba sensimbi encibilikile phakathi nomjikelezo wonke wokushisela, kucatshangelwa isimo esiguqukayo esiqhubekayo kule nqubo.
12.7 - φ 76.2
Insimbi yeCarbon / Insimbi engagqwali / i-Titanium alloy
Langaphambilini TC36 ebiyelwe weld ikhanda
Olandelayo: TC116 ebiyelwe weld ikhanda
I-TC26 ivaliwe ikhanda le-weld
TC116 ebiyelwe weld ikhanda
TC36 ebiyelwe weld ikhanda